Ị nwere ike ịgwa m gbasara toplinks ma gosipụta ndepụta saịtị iji jikọta na?
Ka anyị lee ya anya - inwe nnukwu ọdịnaya peeji maka ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog iji mee ka ọ mara nke ọma ma na-ekwukarị ya na saịtị ndị ọzọ a ma ama na PageRank dị elu bụ ụzọ dị ukwuu isi nwetaghachi azụ azụ azụ maka SEO. Na ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ọ bụghị naanị na-eme ihe na-amasị ndị na-ege ntị na-ege ntị ma na-eto eto ike ike na aha aha nke azụmahịa gị - niile na otu. Ọfọn, n'okpuru m ga-enyere gị aka chọpụta ihe banyere top backlinks na saịtị ndepụta depụtara na organic njikọ ụlọ.
Nkewa VS. Ogologo
Ọ bụrụ na ị nweta SEO n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ naanị njikọ ntanetị nwere njikọ maka ebe nrụọrụ weebụ gị - food grain storage technology trends. Ọ gwụla ma ịchọrọ imerụ ọganihu gị na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog na SEO na ọnụ ọgụgụ, nakwa yana okporo ụzọ weebụ gị ugbu a, na ọnọdụ nchịkọta ọchụchọ n'ogologo oge. Na-arụsi ọrụ ike iji nweta nsonaazụ azụ dị elu site na ndepụta saịtị na PR dị elu na ikike dị elu, jide n'aka na ị zere iji ngwá ọrụ ọ bụla na-akwụ ụgwọ na ụgwọ ụlọ ma ọ bụ ọrụ mgbanwe. Ihe bụ na ọtụtụ n'ime ha na-eji spammed, isi na-adịghị mkpa isi mmalite ma ọ bụ ọbụna ebe rụrụ arụ na-ejikọta gị na. N'ezie, ha na-ejikarị eme ihe n'emeghị ihe rụrụ arụ, dịka ịgba chaa chaa, ịkwa iko na ụlọ ọgwụ na-enweghị ikikere. N'ụzọ dị otú ahụ, ọtụtụ n'ime ọrụ ụlọ ọrụ aghụghọ ndị a enweghị ike ime ihe ọ bụla gbasara organic SEO. N'eziokwu, ha na-egosipụtakarị na ị nwere ike ịmepụta weebụsaịtị gị ma ọ bụ blog na tọn nke na-abaghị uru nke na-abanye na nnukwu site na isi mmalite ndị na-ezighị ezi, kama ịnye gị ụfọdụ backlinks dị elu site na listi saịtị yana ikike a tụkwasịrị obi.
Mee Mmeputa ma ọ bụ Niche-Relevant Relations
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta akara azụ dị elu na ịkụgharị otutu nke netwọk weebụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog na-ewulite mmekọrịta dị mma na isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ a ma ama na ikike dị elu nke dị mkpa maka ụlọ ọrụ azụmahịa gị ma ọ bụ niche ahịa. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta nchịkwa backlinks, nke nwere ike ịbụ ihe kachasị ọnụ ahịa ma dị ike karia ọ bụla ọzọ toplinks na saịtị ndị ọzọ iji mee ka ọhụụ maka njikọ ụlọ njikọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ichebara ịjụ ajụjụ banyere ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi ma ọ bụ ndị na-ede blọgụ. N'ezie, nyere na ị dị njikere ma dị njikere ịkwụ ụgwọ oge zuru ezu na mgbalị maka "ị nweta" ihe kwesịrị ekwesị azụlinks dị ka ọ dị. Chetakwa banyere backlinks na-emepụta - na-emecha, ha nwere ike ịba uru karịa ederede - ha nwere ike "akwụ ụgwọ" gị na ihe ịkwadobere nke ọma, dị ka àgwà isiokwu ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ ndị chọrọ.
Chọta Top Backlinks na saịtị saịtị iji malite
Ọ dịghị mkpa ịsị na enwere ọtụtụ ụdị mgbasa ozi nke ọtụtụ ụdị na azụmahịa maka ịme ikike ha na ijide ụfọdụ backlinks dị ike na n'otu oge. Mana m kwadoro ịmepụta ntanetị gị n'Ịntanet karịsịa na Google Plus, Instagram, Facebook, na Twitter. N'ịme nke a, echefula ichebara akwụkwọ ndekọ azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị metụtara ụlọ ọrụ iji mejupụta data maka kọntaktị gị maka ịnweta akara azụ azụ bara uru na nloghachi. N'ikpeazụ, ị ga - ebido ịmalite iji mejupụta ibem Google My Business, ma gaa n'ihu na ịchọgharị iji chọpụta akwụkwọ ndị ọzọ, akwụkwọ edemede na ndepụta azụmahịa ndị dị mkpa maka mkparịta ụka gị ma ọ bụ niche ahịa.